Ogaden News Agency (ONA) – Maamul cusub oy jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika faraca Cape Town dooratay
Maamul cusub oy jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika faraca Cape Town dooratay
Waxaa xalay shir balaadhan isugu yimid xubnaha jaaliyada gaar ahaan faraca western cape shirkan oo bilawday abaarihii 7 fiidnimo oo saacaday afrikada koonfureed ayaa socday mudo dhawr saac ah ayaa waxaa marti ku ahaa gudoomiyaha jaaliyada soomaalida ogaadeniya ee koonfur afrika mudane Suldaan Cabdi N/hure casaanyo.
Shirka oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa lagu furay wacdi diini ah oo uu so jeediyay fadiiladu sheikh maxamed cabdulahi. Asagoo ka hadlay Alle cabsidiisa iyo faa-iidooyinka ay leedahay cabsida alle isla mar ahaantaana wuxuu xusay in uusan aadamuhu mid midka kale kakaraamo badan uusan jirin illa waxay isku dhaafaan xaga sharafta iyo xaga cisigaba waa alle cabsidiisa.
Waxaa shirka warbixin ka soo jeediyay mudadii uu jiray maamulkii hore wax qabadkiisa iyo hawlaha horyaalaba gudoomiyihii hore mudane cumar sh cabdulaahi ahana hogaanka warfaafinta iyo abaaulka ee dalada guud ee ururka OYSU.
Shirka ayaa u gudbay kaalintii doorashada waxaana goobta shirka laga doortay gudoomiye gudi farsamo wuxuuna soo xushay 4 xubnood oo kamid ahaa xubnaha shirka fadhiyay
Shirkan ayaa u socda si habsami ah sinaan iyo xoriyadi kudheehantahay. Waxaana saacadihii xigay gudoomiye cod aqlabiyad ah loogu doortay mudane sheikh maxamed cabdulahi shilaabo. Isla markaana waxaa si talantaali ah loo doortay 5 tii xubnood ee gudida fulinta ee faraca waxayna kala yihiin;
1-	Hogaanka arimaha bulshada: mudane jaamac guure maxamed
2-	Hogaanka dhaqaalaha : nuur cabdi salaan
3-	Hogaanka warfaafinta: cabdi jamaal
4-	Hogaanka anshaxmarinta: cabdulahi qabdiid shine
5-	Hogaanka diinta ; cabdi axmed cadhays cabdi jabhad
Shirka ayaa laga soo jeediyay tolooyin wax ku ool ah isla markaana lagu sagoontiyay maamulkii hore alle loobaryay in uu ka abaal mariyo wax qabadkoodi isla mar ahaantaana waxaa si jamac ah shirku ugu duceeyay maamulka cusub ee uu hormudka u yahay maxamed shilaabo.
Shirka oo si xasilooni ah kusoo gaba gaboobay ayaa la odhan karaa waxaa kasoo baray go’aano dhaxal gal ah, waxaana lafilayaa in maamlka cusub uu dardar galindoono hawlaha horyaala oo maamulkii hore qabyo ka ahaa.
Faracyada jaaliyada Ogaadeeniya ee kalle ayaa hanbalyo iyo baogaadin usoo jeediyay faraca Cape town maamulkiisa cusub isla markaana balan qaday in ay si joogto ah ula shaqayn doonaan sidi maamulkii kahoreeyay.
Waxaa shirka gabagabadii iyo gunaandkii hadala dheer iyo talo iyo tusaale ah kasoo jeediyay gudoomiyaha jaaliyada mudane suldaan cabdi askar oo ku dhiiri galiyay maamulka cusub ee faraca cape town in ay u sitaagaan shaqo adag oo hortaala loona bahana yahay in lo dhamaystiro si buuxda.
Shirka ayaa mudo kadib waxaa albaabada ulaabay maamulka cusub oo intisi danbe daadihinaya wixina kudhamaaday farxada iyo riyaaq.